Programmer's Diary: Untouchable Home
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 10:51 AM
ဒီအက်ဆေးကို ရီးဒါးဒိုင်ဂျက်စ်ရဲ့ My Story ကဏ္ဍကို လှမ်းပို့ကြည့်ပါလားဗျ....
It's really good one. I feel you! Home is always in our heart.
ခံစားချက် သိပ်ပါတဲ့ Essay လေးပါပဲ..
အဲဒီခံစားချက်မျိုးက လူတော်တော်များများကို ကိုယ်စားပြုမယ်ထင်တယ်။
November 26, 2009 7:40 AM